Shariif oo xilkii ka qaaday saraakiisha ugu sareysay Ciidanka DKMG | raascasayrmedia.com
← Ergadii Shirka Wadatashiga Horomarinta ee Beelaha Siwaakhroon oo Si heer sare ah loogu soo Dhaweeyay Dagmada Baargaal ee gobolka Raacasayr
Puntland iyo Somaliland oo dagaal qasaaro gaystay ku dhexmaray….. →
Shariif oo xilkii ka qaaday saraakiisha ugu sareysay Ciidanka DKMG
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in inta badan ay gacanta ku dhigeen degmooyinka gobolka Gedo, isagoo dhinaca xilka qaadis ku sameeyay Taliyeyaal ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in inta badan gobolka Gedo ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda, isagoo tilmaamay in ciidamada Shabaab ay awoodooda wiiqantay sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Shariif ayaa waxaa uu cadeeyay in ciidamada dowladda ay duulaan ku yihiin gobolada Bay iyo Bakool oo ay wali gacanta ku hayaan Xarakada Mujaahidiina Al Shabaab.
“Shirkaani waxaa uu ku saabsanyahay guulaha Isdabada jooga ah ay ciidamada Qaranka gaarayaan, waan u mahadcelinaynaa ciidamada Qaranka dadaalka ay samaynayaan, cadowgii qasaaro ayaa gaaray, waxaa hadda muuqata inay ka baxayaan magaalooyin farabadan, magaalada Luuq waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda, waxayna kusoo jeedaan gobolada Bay iyo Bakool, waxaana filaynaa in maalmaha soo socda ciidamada dowladda ay guulo la taabankaro soo hoyaan” ayuu yiri Madaxweyne Shariif.
Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa intii uu shirka socday, waxaa ay wariyeyaasha waydiiyeen su’aal aheyd ( dowladda Ethiopia taageero intee la’eg ayay ka qeyb qaadanaysaa dagaalada ka socda gobolada Dalka gaar ahaan kuwa ku dhow dalka Ethiopia) waxaana Shariif uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay siiyaan oo kaliya loojistiko.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa uu ka digay isku dhacyo ka dhaca gobolada ay dowladdu gacanta ku dhigtay, isagoo ciidanka dowladda ugu baaqay in aan la dhibaatayn dadka oo hantidooda aan la boowin.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa uu ka hadlay warar kasoo baxay saraakiisha sar sare ee Xarakada Al Shabaab oo ku aadanaa hanjabaadyo Shabaab ay u jeediyeen dowladda Kenya, waxaana Sheekh Shariif uu yiri.
“Dabcan dad markii ay hab qayaano ah wax u gaystaan, wax walib way samaynkaraan, laakiin awood ay maanta Kenya ku weeraaraan inaysan laheyn aad ayaan u wada ognahay, arintaasina waa fikarad xumada oo ah inay cid waliba la dagaalaan, waxaa laga maar mayn inay ka fakaraan dadka ay marin habaabinayaan oo maalin waliba dagaalka ay galinayaan oo dhimanaya inay yihiin dad Soomaaliyeed oo u baahan nolol iyo Mustaqbal inay yeeshaan” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Dhinaca kale Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya waxaa uu maanta xil ka qaadis ku sameeyay 4-ka mid ah Taliyeyaasha ciidanka dowladda KMG oo ay ka mid ahaayeen.
Cali Max’ed Xasan Cali (Looyaan) oo ah taliyaha ciidamada booliska ee dowladda KMG Soomaaliya.
Axmed Jimcaali Cerfiid oo ah taliyaha ciidanka Milatariga dowladda KMG Soomaaliya.
Janaral Max’ed Sheekh Xasan oo isna ah taliyaha ciidanka nabad sugidda dowladda KMG Soomaaliya
C/laahi Macalin Cali oo ah taliyaha ciidanka Asluubta ee dowladda KMG Soomaaliya, waxaana Madaxweyne Shariif uu sheegay in sababta loo badalay Saraakiisha u ku micneeyay in lala jaan qaado is badlka ka dhacaya Dalka Soomaaliya.
“Isbedelka taliyayaasha ciidanka waa mid muhiim ah, marxalad cusub in la galaayona wad arkaysaaan, waxuuna u baahanyahay inay la jaanqaadaan, taliyeyaasha horey way dadaaleen oo shaqo wacan ayay soo qabteen” ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Macadda sababta Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu u badalay Taliyeyaasha ciidanka hase ahaatee lama magacaabin cidii badali laheyd, waxaana la sheegay in xilkooda ay sii haynayaan ku xigeenadooda.
Badelitaanka Madaxweyne Shariif uu ku sameeyay talisyada Milatariga, Nabad Sugidda iyo Asluubta ayaa waxaa ay kusoo beegsamaysaa xili dowladda KMG Soomaaliya ay dagaalo kula jirto Xarakada Al Shabaab, waxaana jiray eedeymo ay u jeedinayaan dowladda KMG dadka indha indheeya Siyaasadda iyo qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta dowladda Taliyayaasha la badlay iyo shaqadooda.